दैनिक ४ सय ५० क्रेट अण्डा फाल्न बाध्य पोखराको वाराही पोल्ट्री फार्म ! «
दैनिक ४ सय ५० क्रेट अण्डा फाल्न बाध्य पोखराको वाराही पोल्ट्री फार्म !
Published : 17 April, 2020 7:03 pm
लकडाउनले २५ औं दिन टेक्दा पोखराका कृषक तथा पोल्ट्री ब्यवसायी चर्को मारमा पर्न थालेका छन । कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले लकडाउनलाई कडाई गरेसंगै स्थानीय ब्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो बढिरहेको छ । पोखरा १७ स्थित वाराही पोल्ट्री प्रालिले २१ बर्ष अगाडिदेखि प्रालि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
३० हजार लेयर्स कुखुरा पालन गर्दै आइरहेको र दैनिक ४५० क्रेट अण्डा उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । तर हाल लकडाउनले गर्दा ४५० क्रेट अण्डा दैनिक फाल्नुपर्ने स्थिति सृजना भएका प्रालिका सञ्चालक राजु थापा बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार हाल कुखुरालाई चाहिने दानाको आयातमा समस्या भएको तथा कुखुराले दिने अण्डा बजार सम्म पुर्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन ।
थापाका अनुसार दैनिक उत्पादन हुने अण्डालाई बजारमा लगेर बेच्न आफुहरुलाई अप्ठ्यारो परेको र यो स्थितिमा सरकारले समन्वय गरेर ब्यवसायीको समस्या नबुझिदिने हो भने ८० प्रतिशत ब्यवसायीहरु बिस्थापित हुने उहाँको तर्क छ ।
यसरी दैनिक उत्पादन हुने हरेक बस्तुको बजार बन्द हुँदा तथा दैनिक आवश्यक दाना तथा खाद्य बस्तुको सहज आयात नहुँदा ब्यवसायीहरुको गुनासो बढ्न थालेको छ । २१ बर्ष देखि सोही ब्यवसाय गर्दै आएका थापाले सरकारले दाना आयातमा सहजीकरण तथा अण्डा बिक्रीमा समन्वय गरिदिनु पर्ने बताउनु हुन्छ ।
व्यवसायीहरु प्रति उत्तरदायी बन्न पनि सरकारले यो विषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने उहाँको आग्रह छ । सरकारले समयमै ध्यान नपुर्याउने हो भने कास्कीका करिब २ दर्जन ब्यवसायीहरु विस्थापित हुने पनि थापाको भनाइ छ ।